Vista's Colorful Planet: May 2010
မရှုံးနိမ့်သူ ( ၇ ) ဇတ်သိမ်း
နောက်တစ်နေ့ မှာHans ရောက်လာသည်။ သူက Anette ကိုပြုံးပြရင်းပြောသည် ။
“ ထွက်မပြေးတာကျေးဇူးပဲကွာ “
“ ကျမ မိဘတွေက ရှင့်ကိုလာခိုင်းပြီးတော့ သူတို့ ရွာထဲထွက်သွားကြတယ်၊
ကျမရှင်နဲ့စကားသေချာပြောစရာရှိတယ် ၊ ထိုင်ပါအုံး “
Hans က အပေါ်ဝတ် ကုတ်နှင့် သံခမောက်ကိုချွတ်လိုက်ပြီး ၊ထိုင်ခုံတစ်လုံးဆွဲကာ ထိုင်ချလိုက်သည်။
“ ကျမ မိဘများက ရှင့်ကို လက်ထပ်စေချင်ကြတယ် ၊
ရှင်က ရှင့်မိဘတွေ ကိုလည်းပြောပြီး ကတိတွေလည်းပေးတာကိုး “
“ ကျမပြောချင်တာကတော့ ကျမဘယ်တော့မှ ရှင့်ကိုလက်မထပ်ဘူးဆိုတာပဲ ၊
ကျမတစ်သက်မှာဘယ်သူ့ ကိုမှ ရှင့်ကို မုန်းသလို မမုန်းခဲ့ဘူးဖူး “
“ ဒါပေမယ့် Anette ရယ် ၊ မင်းကလေးအတွက် အဖေမလိုချင်ဘူးလား“
“ ရှင်ဟာ ဂျာမန်တစ်ယောက်လိုပဲ မတုံးဘူးဆိုရင် သဘောပေါက်သင့်တယ် ၊
ဒီကလေးဟာကျမအသက်ရှင်နေသ၍ အရှက်ရစေမယ့်အရာပဲ ။
ဂျာမန်စစ်သားနဲ့ ရတဲ့ကလေးကိုပိုက်ပြီးတော့ ကျမမိတ်ဆွေတွေမျက်နှာကို ဘယ်လို ကြည့်ရပါ့မလည်း ။ “
“ တစ်ခုပဲတောင်းဆိုပါရစေရှင် ၊ ကျမ ဘဝနဲ့ ကျမရှိပါစေတော့ ၊
ရှင်ကျမဆီကိုနောက်ဘယ်တော့မှမလာပါနဲ့ တော့ “
“ ဒါပေမယ့် ၊ ဒီကလေးက ကိုယ့်ကလေးလေ ၊ သူ့ ကို ကိုယ်လိုချင်တယ် ၊ ယောက်ျားလေးဆိုတာကိုယ်သိနေတယ်
ဒီကောင်လေးအရွယ်ရောက်လာရင် ကိုယ်တတ်သမျှအားလုံးသင်ပေးချင်တာ ၊
ဘယ်လိုဆိုင်ကယ်စီးရတယ် ၊ သေနတ်ဘယ်လိုပစ်ရတယ်သင်ပေးမှာ ၊
မင်းတို့ နားကစမ်းချောင်းလေးမှာ ငါးတွေရှိတယ်မှလား၊
ကိုယ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ အပျော်ဆုံး ဂုဏ်အယူဆုံးအဖေလုပ်မှာကွ “
သူမက သူ့ ကို အေးစက်တင်းမာ မျက်လုံးလေးများဖြင့်စိုက်ကြည့်နေသည်။
အလွန်ဆိုးဝါးသော ၊ ကြောက်စရာကောင်းသော အကြံအစည်တစ်ခုက
“ ကိုယ့် အတွက်ကြင်ကြင်နာနာ စကား လေးတစ်ခွန်းတောင်မပြောနိုင်ဘူးလားကွာ “ သူကမေးလိုက်သည်။
“ ရှင် ဟာကျမရန်သူပဲ ၊အမြဲတမ်းရန်သူပဲ ၊ ကျမအသက်ဆက်ရှင်နေတာဟာလည်း
ကျမတို့ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတာကို မြင်သွားချင်သေးလို့ ရှင့် ၊
ကျမတို့ လွတ်လပ်မှာပါ ၊ နောင်နှစ် ဒါမှမဟုတ် နောက်နောက်နှစ်တွေမှာ၊
နောက်အနှစ် ၃၀ လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ် ၊
ဒါပေမယ့် သေချာပေါက်လွတ်လပ်မှာရှင့် ၊
အဲဒီကျရင် ကျမနိုင်ငံကို ကျုးကျော်သူတွေနဲ့ ဘာမှ ပတ်သက်နေစရာမလို တော့ဘူး။“
“ ကျမရှင့်ကိုမုန်းတယ် ၊ ရှင့်ကလေးကိုလည်း မုန်းတယ် ။
ကျမတို့ ဟာ စစ်ရှုံးခဲ့တယ် မှန်ပါတယ် ၊
ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးဘူးရှင့် ၊ အရှုံးမပေးသူများဟာ ဘယ်တော့မှ မရှုံးနိမ့်ဘူး ၊ ဒါကိုရှင်နောက်တော့သိလာရမယ် ၊ကဲပြန်ပါတော့“
သူ အတော်ကြာတိတ်ဆိတ်နေပြီးနောက် ထရပ်လိုက်သည်။
သူလမ်းဖက်လျှောက် ထွက်သွားသည်ကို သူမက ပြူတင်းပေါက်မှရပ်ကြည့်နေသည်။
သူလမ်းလျှောက်သွားစဉ် သူမတို့ အိမ်မှာမွေးထားတာကြာနေပြီဖြစ်သောခွေးအိုတစ်ကောင်က ၊ အတင်းလိုက်လာပြီး ထိုးဟောင်တော့သည်။
Hans က ဒီခွေးနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်မှာ လပေါင်းများစွာကြာနေပြီဖြစ်သော်လည်း မအောင်မြင်ပေ။ ဘယ်လို လုပ်လုပ် သူ့ ကို မရင်းနှီးလာခဲ့ ။
အခုလည်း သူ့ ထံပြေးလာရင် ထိုးဟောင်ပြန်တော့၊
ဒေါသထွက်လာပြီး ရက်ရက်စက်စက် ကန်ထည့်ပစ်လိုက်သည်။
သူမက ဒါကိုတွေ့ နေရသည်။ “ တိရိစ္ဆာန် “ “အလိမ်တွေ ၊ အညာတွေ “ သူမကငိုကြွေးလိုက်သည်။
မတ်လပင်ရောက်ခဲ့ လေပြီ။ Soissons ရှိ သူတို့ တပ်မမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာသည်။
စစ်ဆေးမှုတွေ စစ်သင်တန်းတွေ တက်ကြရသည်။
ဘယ်နေရာလို့ မသိသေးသော်လည်း ၊ တစ်နေရာရွှေ့ ကြရမည်မှာ သေချာနေပြီ။
တစ်ချို့ ကသူတို့ အင်္ဂလန်ကို တက်သိမ်းမည့် တပ်ဖွဲ့ တွင်ပါဝင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြသည်ဟုထင်သည်။
တစ်ချို့ ကလည်း Balkans သို့ ပြောင်းရတော့မည်လိုလို Ukraine သို့ လိုလိုပြောနေကြသည်။
Hans မှာအလွန် အလုပ်များနေရာ ၂ ပတ်ကြာမှ လယ်တဲသို့ တစ်ခေါက်သွားနိုင်သည်။
“ အမလေး မင်းလာတာ အတော်ပဲ “ မဒမ် Périer က အော်လိုက်သည် ။
“ ဒီမနက်ပဲကလေးလေးမွေးတယ် ၊ ယောက်ျားလေး တော်ရေ့ “
“ ဟာ ၊ ယောက်ျားလေးဟုတ်လား ၊ ရှန်ပိန်ဖောက်ရအောင်ဗျို့ ၊ Anette ရော ဘယ်လိုနေလည်း “
“ သူ အလွယ်လေးမွေးတာတော့ ၊ ကလေးက ဆံပင်တွေအများကြီးပဲ ရွှေရောင်ဆံပင် မျက်လုံးပြာနဲ့“
“ ကျနော် Anette ကိုတွေ့ ချင်တယ် “
“ နေအုံး ၊ သူမင်းကို တွေ့ ချင်လား မတွေ့ ချင်လားမသိဘူး ၊ ကလေးကို မင်းကို ပြမယ် ခဏစောင့် “
မဒမ် Périer က အပေါ်ထပ်သို့ တက်သွားသည် ၊ ထို့ နောက် ချက်ခြင်းပြန်ဆင်းလာကာ
“ဘယ်ရောက် သွားကြပြီလည်း ၊ မရှိတော့ဘူး “ ဟု အော်သည်။
သူတို့ ၃ ဦး သူမနာမည်ကို ခေါ်ကာ တစ်ခန်းဝင်တစ်ခန်းထွက်ရှာကြသည်။
အဘိုးကြီးက အရှေ့ တံခါးမှကြည့်ကာ
“ အရှေ့ ဘက်လမ်းကနေ အပြင်သွားတာ “ ဟုဆိုသည်။
“ အမလေး ၊ ဘုရားဘုရား သေတော့မှာပဲ လုပ်ကြပါအုံး “ မဒမ် Périer ကအော်တော့သည်။
“ကျနော်တို့ လိုက်ရှာမှ ဖြစ်မယ် ဘယ်ကိုလိုက်ရမှာလည်း “ Hans ပြောသည်။
“ စမ်းချောင်းလေးဘက် “ အဘွားကြီးကအော်သည် ။
“ ကျုပ်ကြောက်လာပြီ ၊ ကြောက်လာပြီ “
Hans က တံခါးကို ဆွဲဖွင့် လိုက်တော့ Anette က တံခါးဝ ကနေပြန်ဝင်လာသည်။
သူမ တစ်ကိုယ်လုံး အသေကောင်လို ဖြူဖျော့နေသည်။
မဒမ် Périer က ပြေးသွားပြီး ဖက်ထားလိုက်သည်။
ဒါပေမယ့် Anette က သူမကို တွန်းပစ်လိုက်ကာ Hans ကိုကြည့်သည်။
“ ရှင်ရောက်လာတာ အချိန်ကောင်းပဲ “
“ ကလေးရော ၊ ကလေးလေးရော “ မဒမ် Périer က အော်ငိုရင်းမေးနေသည်။
“ ကျမ ချက်ချင်းလုပ်မှ ဖြစ်မှာမို့ လုပ်လိုက်တယ် ၊ စောင့်နေရင် လုပ်ရက်မှာ မဟုတ်တော့လို့ “
“ Anette ကလေးကို နင်ဘာလုပ်လိုက်ပြီလည်း ?? !! “
“ ကျမလုပ်သင့်သလိုလုပ်လိုက်တယ် ၊
အဲဒါလေးကို စမ်းချောင်းထဲမှာ သေတဲ့ အထိ နှစ်ထားပြီး သတ်ပလိုက်တယ်လေ “
Hans သည် သေကွင်းသေကွက်ကို ထိမှန်ခံရသော တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်၏ သေငယ်ဇောဖြင့်နာကျင်စွာအော်လိုက်သကဲ့သို့အသံနက်ကြီးဖြင့်တစ်ချက်အော်လိုက်ပြီးနောက်
သူ့ မျက်နှာကို လက်များဖြင့်အုပ်ကာ အိမ်ထဲ မှ ပြေးထွက်သွားလေတော့သည်။
W. Somerset Maugham ၏ The Unconquered ကိုကျနော် နားလည်သလို ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁၂ နှစ်သမီးမှာ ပထမဆုံး English လိုဖတ်ဖူးတဲ့Somerset Maugham၏ ဝတ္ထုတိုမို့ အမှတ်တရ ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့ တစ်ပိုင်းတင်ဖြစ်အောင် တုတ်ထမ်းစောင့်ပြီး အားပေးသော သူငယ်ချင်း ရွှေငါး၊ မအားတဲ့ကြားလာလာဖတ်ပြီး သတ်ပုံအမှား၊ စာအမှား တွေပြင်ပေးသော ငါးပြေမ နှင့် ကိုဘ ၊ သည်းခံဖတ်ပေးသော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။း)
Labels: Books;ဘာသာပြန် 15 comments | Links to this post
မရှုံးနိမ့်သူ ( ၆ )
ဂျာမန်သတင်းစာများက နာဇီလေတပ် Luftwaffe ကြောင့် အင်္ဂလန်ကျွန်း ပျက်စီးရပုံ ၊
လူတွေထိန့် လန့် ကြောက်ရွံ့ ကြပုံ များကို ဝေဝေဆာဆာဖော်ပြကြသည်။
ရေငုတ်သင်္ဘောများကလည်း အင်္ဂလိပ်ရေတပ်ကို ဖျက်ဆီးပုံ ၊
အင်္ဂလန်မှာ ငတ်နေပြီ စသည်ဖြင့် သတင်းများဖတ်ရသည်။
နွေဦးပေါက်မတိုင်ခင်မှာပင် ဂျာမန်တပ်မတော်က အောင်ပွဲခံပြီး
သူက ပြင်သစ်မလေးနှင့်လက်ထပ်မည် ၊ သူမ ၏လယ်ကိုလုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း
သူ့ အိမ်သို့ စာရေးထည့်လိုက်သည်။
သူတစ်ကယ်လည်း သူမတို့ လယ်မြေကို သဘောကျပြီး Anette မိဘများနှင့်ပင်
သူဂျာမနီက မှာယူမည့် နောက်ဆုံးပေါ်ထွန်စက်အကြောင်း၊
သူက လယ်ထဲတွင် Anette မကူညီနိုင်သည်များကို ပင်ကူလုပ်ပေးသေးသည်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ သူမကို အနားရစေသည်။
Anette ကတော့ ဒီပုံစံသာ။ အရင်လိုရန်လို မြဲ ။
စကားလည်းဘယ်တော့မှ မပြော။ တတ်နိုင်သလောက် သူမအခန်းထဲမှာပဲသူမနေသည်။
တစ်နေ့သူလယ်တဲသို့ အသွား မဒမ် Périer ကို လမ်းတွင်တွေ့ ရာ ဆိုင်ကယ်ရပ်လိုက်သည်။
“ မင်း ပြန်အုံး ၊မလာနဲ့ အုံး Pierre သေပြီ “
“ ဘယ်သူတုံး Pierre ဆိုတာ “
” Anette လက်ထပ်မယ့် ကျောင်းဆရာဆိုတာလေကွယ် “
“ ဟယ် ငါတယ် ကံကောင်း “ Hans တွေးလိုက်သည်။
“ ဒါဆို ကျနော့်အတွက် အခွင့်အလမ်း ပွင့်တာပေါ့“ သူကပြောလိုက်သည်။
“ သူလုံးဝမငိုဘူးကွဲ့ “ မဒမ် Périer ကပြောသည် ။
“ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ သာမင်းကိုတွေ့ လို့ ကတော့ ဓါးနဲ့ ထိုးသတ်လိမ့်မယ် “
“ အာ ၊ ကျနော်နဲ့ ဘာဆိုင်လို့ လည်း အဲဒီလူသေတာ ၊ ဒါနဲ့ သူသေတာ ဘယ်လိုသိတုံး“
“ ဆွစ်ဇာလန်ဖက်ကနေလွတ်ပြေးလာတဲ့သုံပန်းတစ်ယောက်က Anette ကို စာရေးလိုက်တာ “
“ အကျဉ်းစခန်းမှာ အစားအစာမဝလို့ သပိတ်မှောက်မှုဖြစ်တယ်တဲ့ ၊ သပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေ ပစ်သတ်ခံရတယ်တဲ့၊ အဲဒီထဲမှာ Pierre ပါသွားတယ်တဲ့လေ “
Hans ငြိမ်သွားသည်။ ဒီကောင်ကသေသင့်တာပေါ့လို့ သူကတွေးမိသည်။
သူတို့ က ဆန္ဒပြရအောင် အကျဉ်းစခန်းများဘာမှတ်နေလို့ တုံး ၊
“သူ့ ကိုခဏလောက်လွှတ်ထားလိုက်အုံး“ မဒမ် Périer ကဆိုသည်။
“စိတ်ငြိမ်သွားတဲ့အခါ ကျုပ်ဖြောင်းဖြပေးမယ် “
“လာလို့ ရပြီဆိုရင် မင်းကို စာထည့်လိုက်မယ်လေ“
“ အင်း၊ ကောင်းပြီလေ ၊ ကျနော့်ကို ကူညီမယ်မဟုတ်လား “
“ အိုး စိတ်ချစမ်းပါတော် ၊ ကျုပ်ယောက်ျားနဲ့ လည်းတိုင်ပင်ပြီးပြီ၊
လက်ခံဖို့ ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ပြင်သစ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးက ပူးပေါင်းဖို့ ဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီးသားပါ။
ပြီးတော့ ကျုပ်ကလည်း Anette အတွက် တော့
ကျောင်းဆရာထက် ၊ မင်းဟာခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက် ပိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်လေ၊ ပြီးတော့ကလေးကလည်းရှိသေးတယ်မှလား “
“ ကျနော်တော့ ယောက်ျားလေးဖြစ်စေချင်တယ်ဗျာ “ Hans ကဆိုသည်။
“ ယောက်ျားလေးပါ သေချာတယ် “ ငါဗေဒင်ချပ်တွေကြည့်တိုင်းယောက်ျားလေးပဲကျတယ်“
“ သြော် မေ့တော့မလို့ ၊ဒီမှာ ခင်ဗျားတို့ အတွက် သတင်းစာတွေ “
Hans က ဆိုင်ကယ် အဖုံးကို လှန်လိုက်သည်။
သူက အဘွားကြီးကို Paris-Soir သတင်းစာ ၃ စောင်ပေးလိုက်ရာ သူမကသေချာဖတ်နေသည်။
သူက ပြင်သစ်တွေ သည် ဟစ်တလာ၏ ဥရောပအတွက်ချမှတ်မည့် “ အမိန့် သစ်“ ကိုလက်ခံရမည်ဆိုသည့်အကြောင်း၊
ပင်လယ်ပြင်ကိုစိုးမိုးထားသော ဂျာမန် ရေငုတ်သင်္ဘောများ၏ အကြောင်း ၊
အင်္ဂလန်ကို ဒူးထောက်အောင်ဆောင်ရွက်နေသောတိုက်ခိုက်မှုများအကြောင်း နှင့်
အကူအညီပေးမည်ဆိုသော အမေရိကန်များမှာလည်း အသင့်မဖြစ်သေးကြောင်း များကို ခြုံငုံဖတ်ပြလိုက်သည်။ပြင်သစ်သည် အဖဂျာမနီနိုင်ငံတော်နှင့်ပူးပေါင်းပါက
ထိုဆောင်းပါးသည် ဂျာမန်ကရေးခြင်းမဟုတ်ပဲ ပြင်သစ်တစ်ဦးကရေးထားခြင်းဖြစ်သည် ။
Pierre နာရေးသတင်းကြားအပြီး ၁၀ ရက် ခန့် ကြာပြီးနောက် ညစာစားအပြီးမှာ
မဒမ် Périer က Anette ကို
“ အမေ Hans ဆီကို စာရေးလိုက်တယ် မနက်ဖြန်လာခဲ့ ဖို့ “
“ ပြောပြတာ ကျေးဇူးပဲ အမေ ၊ ကျမ အခန်းထဲမှာနေလို့ ရတာပေါ့“
“ ကဲ ၊ သမီးလေးရယ် ၊ Pierre လည်းဆုံးပြီပဲကွယ် ၊
Hans က သမီးကိုလည်းချစ်တယ် ၊လက်ထပ်ချင်နေတဲ့ဟာကို ၊
သူမရှိပဲ အမေတို့ လယ်ကိုလည်းဘယ်လိုဆက်ထိန်းသိမ်းမလည်း။
သူက ထွန်စက်တောင် သူ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်တော့မလို လုပ်နေပြီ ၊ ပြီးခဲ့တာတွေပြီးပါစေတော့သမီးရယ် “
“ အမေ သမီးကို သဘောမပေါက်သေးပဲကိုး ၊ ကျမသူ့ ကိုအရမ်း မုန်းတယ်အမေ ၊
သူ့ ရဲ့ ဘဝင်လေဟပ်နေတဲ့ ပုံစံ ၊ ဆရာကြီး ပုံစံကိုလည်း ရွံတယ် ။
သူ့ ကို ကျမသတ်လိုက်လို့ ရတယ် ၊ ဒါပေမယ့် သူသေတာနဲ့ တင်မကျေနပ်နိုင်သေးလို့ ။
ကျမ ရင်ထဲမှာ တစ်နုံ့ နုံ့ ခံစားနေရသလို သူ့ ကိုခံစားစေချင်တာ၊
အဲဒီလိုသာသူ့ ကိုပြန်ခံစားရအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆို ကျမသေပျော်ပြီအမေ “
“ မိုက်လှချေလား သမီးလေးရယ် “
“ နင့်အမေပြောတာမှန်တယ်သမီး “ အဘိုးကြီးက ဝင်ပြောသည်။
“ တို့ တွေဟာ စစ်ရှုံးကြပြီ ၊ အောင်နိုင်သူတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းရတော့မှာ “
အလိမ္မာသုံးပြီး ပေါင်းထားရင်းနဲ့ မှအနိုင်ပြန်ယူရမယ်လေ။
ဂျုးတွေနဲ့ ဗြူရိုကရက်တွေ တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုဖျက်ဆီးခဲ့လည်း ကြည့်ပါလား သတင်းစာမှာ “
“ ဒီသတင်းစာထဲက ဟာတွေကျမ ယုံမယ်ထင်နေလား အဖေ ၊ ဒါတွေက အလိုတော်ရိတွေရေးတာ ၊ သစ္စာဖောက်တွေရေးထားတာအဖေရဲ့ ။ သူတို့ ကို ဂျာမန်တွေက ငွေနဲ့ ပေါက်ထားတာ “
“ ဘာလို့ ဒီကလေးကို ဒီလောက်တောင်မုန်းနေရတာလည်း သမီးရယ် ၊
သူက သမီးကို အတင်းသိမ်းပိုက်တာ ဟုတ်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့်အဲဒီတုန်းက မူးနေလို့ ပါ၊ ပြီးတော့လည်း
ဒါကို ပြန်ဆယ်နိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေတဲ့ ဟာပဲကွယ် “
မဒမ် Périer ကပြောရင်းနဲ့စိတ်မရှည်ဖြစ်လာသည်။
“ သူက ညည်း အဖေကို ဆေးတံသောက်ဆေးဆိုလည်းယူလာပေးတယ် ၊ အစားအစာတွေလည်းယူလာပေးတယ်။
ညည်းက ချိစ်တွေ ၊ထောပတ်တွေ မစားတာတော့ဟုတ်ပါပြီ ၊
ဒီနေ့ ညည်းစားတဲ့ စွပ်ပြုတ်က အသားက သူယူလာတာ ၊ အသုပ်လုပ်တဲ့အထဲကဆီကလည်းသူ့ ဟာပဲ “
Anette က သူမမျက်နှာကို လက်များဖြင့်အုပ်ထားလိုက်သည်။
“ကျမသိတယ် ၊ မစားဘဲနေတာပဲ မတတ်နိုင်လို့ ဆာလွန်းလို့ စားမိတာ “
“ အေး ၊ စားပြီးဘီလေ “
“ ဟုတ်ပါတယ် ၊ စားမိပါတယ် ၊ ရှက်ရှက်နဲ့ ပဲစားမိတာပါ။
သူတို့ တွေက တင့်ကားတွေ ၊ လေယာဉ်တွေနဲ့ ကျမတို့ လူအင်အားကို ဖြိုခွင်းပြီး ၊
အခု စိတ်ဓါတ်ကို ပါ အငတ်ထားလို့ ရိုက်ချိုးနေပြီပေါ့ “
မရှုံးနိမ့်သူ ( ၅ )
နောက် ၃ရက်ခန့် Soissions မှ မခွာနိုင်ဘဲဖြစ်နေရသည်။
အားလျှင်အားခြင်း လယ်တဲသို့ ပြေးသွားလိုက်သည်။
အဘွားကြီး မဒမ် Périer ကို အသွားလမ်းတွင်တွေ့ ရာ ဆိုင်ကယ်ကိုရပ်လိုက်သည်။
အဘွားကြီး ၏သူ့ အပေါ်ခင်မင်မှုဆိုသည်မှာလည်း
“ ကျနော် Anette အကြောင်းသိပြီးပြီ “
“ ဘယ်လိုများ သိသွားသတုံးကွဲ့ ၊ သူက မင်းကိုလုံးဝမသိစေချင်ဘူး “
“ သူပဲကျနော့်ကို ပြောပြတာပဲ ၊ဘာလို့ခင်ဗျားက အစောကမပြောတာလည်းဗျာ “
အဘွားကြီးက ဖြစ်ကြောင်းရယ်ကုန်စင် ပြန်ပြောပြလေတော့သည်။
ထို ပြဿနာကြီး ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Anette မှာ အိပ်ရာထက်တွင် ရက်ပေါင်းများစွာလဲပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေသည်။
အော်လိုက် ငိုလိုက်နဲ့ ဖြစ်နေရာ ၊မိဘများက သူမရူးသွားတော့မည်လားတောင်ထင်ကြရသည်။
ပင့်စရာ ဆရာဝန်ကလည်း ရွာတွင်မရှိတော့ ၊
Soissons မှာတောင် ဆရာဝန် ၂ ယောက်ပဲရှိတော့သည်။
သူတို့ နှစ်ဦးလုံး သက်ကြားအိုများဖြစ်ရာ ၊ ရွာအထိ ခြေမကြွနိုင်ပေ။
ဂျာမန်များကလည်းမြို့ ပေါ်ကလူများကို ထွက်သွားခွင့်မပေး ။
Anette မှာထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာသောလည်း ၊စိတ်မူမမှန်သေး ၊ ရှော့ခ်ဖြစ်သလိုဖြစ်နေသည်။
တစ်လ ပြီးတစ်လ ကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက် မဒမ် Périer က သင်္ကာမကင်းဖြစ်လာသဖြင့်
သူ့ သမီးကို စစ်မေးသည်။
သူတို့ တွေသံသယနှင့် လန့် ဖြန့် ကုန်ကြပြီး အဘိုးကြီး Périer ကို အသိမပေးရဲကြ ။
Soissons သို့ သူတို့ ၏ကားစုတ်ကြီးဖြင့် သားအမိတစ်တွေမောင်းသွားကြသည်။
တစ်မြို့ လုံး ဂျာမန်စစ်သားတွေ အပြည့် ၊
နေရာတိုင်းမှာလည်း ဂျာမန်ဆိုင်းဘုတ်တွေပွထလို့ ။
ဆရာဝန်ဆီရောက်တော့ သူတို့ သံသယကို အတည်ပြုပေးလိုက်သည် ။
ဒါပေမယ့်သူက ကက်သလစ်ဘာသာဝင်မို့ သူတို့ ကိုမကူညီနိုင်ကြောင်းပြောလေသည်။
သူတို့ က နောက်ဆရာဝန်တစ် ဦးကိုလည်းသိသေးရာ ထိုဆရာဝန်ထံသွားကြပြန်သည်။
တံခါးဘဲလ်ကို တီးနေရာ အချိန်အတော်ကြာအထိဘယ်သူမှ မဖွင့်ပေး။
နောက်ဆုံးမှ အမည်းရောင် ဝမ်းနည်းမှုဝတ်စုံဝတ်ထားသော အမျိုးသမီးက လာဖွင့်ပေးသည် ။
ဆရာဝန် အကြောင်းမေးလိုက်ရာ သူမက ငိုတော့သည်။
ဆရာဝန်မှာ ဂျာမန်များကဓါးစာခံအဖြစ် ထိန်းသိမ်းခံနေရသည်။
တစ်နေ့ က ဂျာမန် အများအပြားရှိသော ကော်ဖီဆိုင်တွင်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားရာ ၊ အရာရှိနှစ်ယောက်သေပြီး ၊ အများအပြား ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရသည်။
“ ဘယ်သူခွဲတာလည်း မပေါ်ရင် သူတို့ က ဓါးစာခံတွေကို ပစ်သတ်မယ်တဲ့“ အမျိုးသမီးကဆိုသည်။
အမျိုးသမီး ကကြင်နာတတ်ပုံပေါ်ရာ မဒမ် Périer က သူတို့ အကြောင်းပြောပြလိုက်သည်။
“ သနားစရာမိန်းကလေး ပါလား “ ဒါပေမယ့်သူမလည်းမကူညီနိုင်ပေ။
ဒါကတော့ အဘွားကြီး မဒမ် Périer က Hans ကို ဇတ်စုံခင်းပြခဲ့တာဖြစ်သည်။
နောက်မှ “ နက်ဖြန် တနင်္ဂနွေနေ့ ပဲ ၊ ကျနော်အားတယ် လာခဲ့ မယ် ၊
တစ်ခုခု ကောင်းကောင်းလေးလည်းယူခဲ့ မယ် “
တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် သူတို့ တွေအားလုံးအိမ်မှာ ရှိနေစေချင်သောကြောင့်
သူ အတန်ကြာနောက်ကျခံပြီးမှ သွားလိုက်သည် ။
သူက အထုပ်ခပ်ကြီးကြီး ယူလာသည် ၊ ရှန်ပိန် အရက်တစ်ပုလင်းလည်းပါသည်။
“ ဒီမှာကြည့် ၊ မင်းအတွက်ပစ္စည်းတွေ ပါလာတယ် “ Anette ကိုပြောလိုက်သည်။
“ မလိုချင်ပါဘူး “
“ အဟုတ်လား “ သူက စပ်ဖြီးဖြီးပြုံးလိုက်သည် ။ “ ကလေးအတွက် လိုတယ်လေ “
“ မှန်တယ် Anette ၊ တို့ မှာဘာမှ မရှိဘူးလေ “ အဘွားကြီးက ဝင်ပြောသည်။
ထို့ နောက် ပုလင်းကို မြင်သွားကာ “ ဟယ် ရှန်ပိန်ပုလင်းပါလား “
“ ရှန်ပိန် ဘာလို့ ယူလာတာလည်းဆိုတော့ .. ကျနော် အကြံရလာလို့ လေ။
ဟိုနေညက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ ၊ ကိုယ်တမင်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ မတော်တဆဖြစ်သွားတာပါ ၊ ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်လို့ မရဘူးလား “
သူမက မုန်းတီးစွာ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။
“ သေတောင် ခွင့် မလွှတ်ဘူး ၊ ဘာဖြစ်လို့ ကျမနဲ့ လာပတ်သတ်နေရတာလည်း ၊
ကျမ ဘဝကို ဖျက်ဆီးခဲ့တာနဲ့ မလုံလောက်သေးဘူးလား ဟင် “
“ မင်းဘဝ ကို ဖျက်ဆီး လိုက်တယ်လို့ ပြောမရပါဘူးကွာ ၊
မင်းမှာကလေးရှိနေပြီဆိုတာသိတာ ကိုယ်တော်တော်ဝမ်းသာတယ် သိလား ၊
“ ဂုဏ်ယူတယ် ?? “
“ ကိုယ့် ကလေးကို မွေးပေးစေချင်တယ် Anette “
“ အောင်မာ ရှင်ကဘာလေသံနဲ့ ပြောနေတာလည်း “
“ ဒီမယ် ၊ စစ်ကြီး ကနောက် ၆ လလောက်ဆိုပြီးတော့မှာ ၊ နွေဦးပေါက်ဆို အင်္ဂလိပ်တွေ ဒူးထောက်တော့မှာ၊
အဲဒီကျရင် ကိုယ်တပ်ကထွက်လို့ ရပြီ ၊ ကိုယ်မင်းကို လက်ထပ်မယ်လေ “
“ ရှင်က ၊ ကျမကိုလက်ထပ်မယ် ၊ ဘာလို့ တုန်း “
သူက ပြင်သစ်လို ပြောမထွက် သဖြင့် ဂျာမန်လို ပြောချလိုက်သည် ။
“ Ich liebe dich .“
“ ဟဲ့ ၊ သူဘာပြောတာတုန်း “ အဘွားကြီးက မေးသည်။
“ သူက ကျမကို ချစ်တယ်လို့ ပြောတာ “
Anette က ခေါင်းကို တစ်ချက် ခါလိုက်ပြီး စရယ်တော့သည်။
သူမ ကရယ်လို့ မဆုံးနိုင်ဖြစ်နေပြီး မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ်စီးကျလာသည်။
“ ဂရုစိုက်မနေနဲ့၊ ဟစ်စတီးရီးယားလေ ၊ သိတယ်မှလား ၊ စိတ်ကမှန်သေးတာမဟုတ်ဘူး “ အဘွားကြီးကဆိုသည်။
Anette က စိတ်ကိုထိန်းကာ အရယ်ရပ်လိုက်သည်။
“ ကိုယ်ရှန်ပိန်ယူလာတာက ကိုယ်တို့ စေ့ စပ်ကြောင်းလမ်းတဲ့ အနေနဲ့ လေ “
“ ဒါမှ အဆိုး တက အဆိုးဆုံးပဲ ၊ အရူးအလုပ်ခံရတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပဲ “ Anette က ဆိုသည်။
Hans ကဂျာမန်လို မပြောတော့ ပြင်သစ်လိုပြောင်းပြောသည်။
သူနောက်ပြောမယ့်စကားတွေကို Anette မိဘတွေနားလည်စေချင်သည်။
“ အခုလည်း လက်မထပ်နိုင်သေးဘူးလေ၊ စစ်ပြီးတော့မှ လက်ထပ်လို့ ရမယ် ၊
ကိုယ်က ခြူးတစ်ပြားမှ မရှိတဲ့ ကောင်မဟုတ်ပါဘူး ၊ ကိုယ့်အဖေဆိုလည်း ချမ်းသာတယ် ၊ မင်းလိုလေသေးမရှိစေရဘူး “
“ မင်း ၊ ကက်သလစ် ဘာသာဝင်လား “ အဘွားကြီးကမေးသည်။
“ ဟုတ်တယ် ခင်ဗျ ၊ ကျနော်ကက်သလစ်ပါ “
“ ဒါဆို တစ်မျိူးပဲ “
“ ကိုယ့်တို့ မှာ လယ်တွေလည်းရှိတယ် ၊ ကား ၊ရေဒီယို ၊တယ်လီဖုန်းလည်းရှိတယ် “
သူမက သူမအဖေထံလှည့်ပြောလိုက်သည် ။
“ အားလုံးပြည့်စုံတဲ့လူကြီးလူကောင်း ကိုပြည့်စုံကြီးပေါ့ဟုတ်လား “
“ ကျမတော့နေရာကျတာပဲပေါ့ ၊ ဟင် ၊ စစ် ရှုံးနိုင်ငံက မိန်းမ ၊ လက်မထပ်ပဲမွေးထားတဲ့ ကလေးနဲ့ 
ဟားဟား ၊ပျော်စရာ ကြီး “ သူမက ငိုရင်းပြောသည်။
စကားနည်းသူ အဘိုးကြီး Périer ထံမှ အသံထွက်လာသည်။
“ မင်း သဘောကောင်းတာ ငါသိပါတယ် ။ ငါလည်း စစ်ကိုကြုံဖူးပါတယ် ၊ ဒီလိုပဲဗရုတ်သုတ်ခတွေဆိုတာဖြစ်ကြတာပါပဲ ၊ ဒါပေမယ့် ငါတို့ မှာ သားကသေသွားပြီ
Anette ပဲကျန်တော့တယ်၊ သူ့ ကိုမင်းနဲ့ ထည့်လိုက်လို့ တော့မရဘူး “
“ ဒါဆိုလည်း ၊ ကျနော်ဒီမှာနေမှာပေါ့ “
Anette က သူ့ ကို ဖြတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်သည်။
“ ဘယ်လို ကွဲ့“ အဘွားကြီးက မေးသည်။
“ ကျနော့်မှာ ညီရှိသေးတယ် ၊ ညီက အဖေ့ကိုကူလို့ ရတယ်လေ ။ ကျနော် ဒီနိုင်ငံမှာနေရတာလည်းသဘောကျတယ် ၊
အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်မယ့်သူသာရှိရင် ဒီလယ်တွေက လယ်ကောင်းတွေ ပဲ။
စစ်ကြီးပြီးရင် ဒီမှာ အခြေချမယ့်ဂျာမန်တွေ အများကြီးပါ။
ပြင်သစ်မှာ ရှိတဲ့ မြေတွေနဲ့ လယ်လုပ်မယ့်သူတွေ လောက်မှ မလောက်တာ “
Anette က သူမ မိဘတွေ ဘာတွေးနေပြီဆိုတာ ရိပ်မိလိုက်သည်။
သူတို့ မှာ သားလည်းသေသွားပြီ ၊ အားကောင်းမောင်းသန်
မဒမ် Périer က “ ဒီလို သာဆိုရင်တော့ စဉ်းစားရတော့မယ် “
“ အမေ လျှောက် မပြောနဲ့ “ သူမက တင်းမာစွာပြောလိုက်သည်။
ထို့ နောက် Hans ဖက်လှည့်ကာ ၊
“ ကျမက ကျမအရင်အလုပ်လုပ်တဲ့ မြို့ က ယောက်ျားလေးကျောင်း
ဆရာနဲ့ စေ့စပ်ထားပြီးသား၊ စစ်ပြီးရင်လက်ထပ်ဖို့ ပဲ ၊
ဒါပေမယ့် ရှင့်လိုအရိုင်းအစိုင်းမဟုတ်ဘူး ၊
အရမ်းယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ တယ် ၊သူ့ ကိုကျမ ချစ်တယ် ၊ အသည်းနင့်အောင်ကိုချစ်တာ “
“ သူအခုဘယ်မှာလည်း “
“ ဘယ်မှာလည်း ? ။ ဘယ်သိနိုင်မလည်း ၊ ဂျာမနီတစ်နေရာရာမှာပေါ့ ၊ သုံ့ ပန်းလေ ၊
အငတ်အပြတ် စစ်သုံပန်းပေါ့ ၊
ရှင်က ကျမတို့ အစားတွေ စားပြီး ဇိမ်ယစ်နေချိန်မှာ သူကတော့ ငတ်နေရတယ်လေ ၊
ကျမရှင့်ကိုမုန်းတယ် ဆိုတာ ဘယ်နှစ်ခါလောက်ပြောရမလည်းဟင် ၊
ရှင့်ကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ များပြောရဲသေးတယ် ၊ လုံးဝပဲ။
သူလား ဒီကိစ္စအတွက် ကျမကို ခွင့်လွှတ်မှာပေါ့ သေချာတယ် “
“ နောက်ပြီး ရှင်နဲ ကျမစေ့စပ်တယ် ဆိုတာသာ သိရင် ၊ ရှင့်ရဲ့ ပိုးခြေအိတ်တွေ ၊ ထောပတ်တွေ ၊ ချိစ်တွေ အတွက် ကျမ ကိုယ်ကျမရောင်းစားတယ် ဆိုတာသာသူသိရင်လေ ၊သူဘယ်လို နေရှာမလည်း
“ ပြီးတော့ ရှင့်ကလေး ၊ ရှင့်လိုပဲထွားထွား ၊ရွှေရောင်ဆံပင် ၊ မျက်လုံးပြာနဲ့၊ အမလေး ဘုရားရေ “
သူမက မီးဖိုထဲမှပြေးထွက်သွားတော့ သည်။
Hans က ရှန်ပိန်ပုလင်းကိုကြည့်နေရင်း ထရပ်လိုက်သည်။
အဘွားကြီးက လမ်းမရောက်အောင်လိုက်ပို့ ရင်း
“ နောက်မှ ထပ်လာခဲ့နော်။“
သူ့ ဘက်က အဘွားကြီးရှိကြောင်း Hans သဘောပေါက်သွားသည်။
( Image from Google )
Labels: Books;ဘာသာပြန်0comments | Links to this post
မရှုံးနိမ့်သူ ( ၄ )
သူ နောက် ၁၀ ရက်လောက်ကြာမှ လယ်တဲသို့ တစ်ခေါက်ပြန်သွားနိုင်သည်။
သူ အိမ်ထဲလျှောက်ဝင်သွားတော့ လယ်သမားကြီးနှင့်သူ့ ဇနီးတို့ထိုင်နေကြသည်။
ညနေစောင်းခါနီးဖြစ်ပြီးအဘွားကြီးက မီးဖိုမှာ ဟင်းချက်နေသည်။
သူဝင်လာတာကို ကြည့်နေသော်လည်း သူတို့ မျက်နှာမှာ
အံ့သြပုံမရသောကြောင့် ၊သူလာသွားသည့်အကြောင်းကို မိန်းကလေး
သူတို့ က စကားမပြောကြပေ ၊ အဘွားကြီးက ဟင်းအိုးမွှေရင်း အဘိုးကြီးက စားပွဲခုံကို စိုက်ကြည့်နေသည်။
သူတို့ တိတ်ဆိတ်မှုကို Hans က မသိသလိုနှင့်
“ ကောင်းသောနေ့ ပါခင်ဗျာ ၊ ကျနော် လက်ဆောင်တွေယူလာပါတယ်“
သူယူလာတာတွေက ချိစ့်အကြီးတစ်တုံး ၊ အသားတစ်တုံး နှင့် ငါးသေတ္တာ နှစ်ဗူး ဖြစ်သည်။
အဘွားကြီးက လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ သူမမျက်လုံးတွေကို တွေ့ လိုက်သည့်အခိုက် သူပြုံးလိုက်သည်။ ထိုမျက်လုံးများတွင် တက်မက်မှုအပြည့်ပါသည် ။
အဘိုးကြီးကတော့ အစားအသောက်တွေကို တိတ်ဆိတ်စွာ ကြည့်နေသည်။
Hans က ပြုံုးပြလိုက်သည်။
“ ကျနော်အရင်တစ်ခါတုံးက နားလည်မှုလွဲကြရတာကို စိတ်မကောင်းပါဘူး ၊ ဒါကို လည်းစိတ်ထဲမထားသင့်တော့ပါဘူး “
ထို အခိုက်အတံ့မှာ မိန်းကလေး အခန်းထဲဝင်လာသည်။
“ ရှင်ဘာလာလုပ်ပြန်တာလည်း “ သူမက စူးရှစွာအော်လိုက်သည်။
ထို့ နောက် သူ ယူလာသောအရာများသို့ အကြည့်ရောက်သွားကာ ၊
ပစ္စည်းတွေကို ကောက်ယူပြီး သူ ကိုပစ်ပေါက်ရင်း
“ ယူသွား ၊ ပြန်ယူသွား “
သူ့ အမေကြီးက ရှေ့ သို့ တိုးလာကာ
“ Annette ၊ မရူးစမ်းနဲ့“
“ သူ့ လက်ဆောင်တွေ ကျမလက်မခံနိုင်ဘူး အမေ “
“ ဒါ ငါ့ တို့ အစားအစာတွေပဲ သူတို့ တွေ က ငါတို့ ဆီကယူသွားတာ၊
ငါးသေတ္တာကိုကြည့်ပါလား Bordeaux ကလုပ်တာ “
Hans က မိန်းကလေးကို လှောင်ပြုံးပါသော မျက်လုံးပြာပြာများဖြင့် စိုက်ကြည့်နေသည်။
“ Anette ဆိုတာ မင်းနာမည်ကိုး ၊ ချစ်စရာပဲ ၊ ဘာလို့ မင်းက မင်းမိဘတွေကို အစားအသောက်တွေမယူစေချင်တာတုန်း ၊
မင်းပဲပြောတော့ ချိစ့် မစားရတာ ၃ လကျော်ပြီဆို ။ ငါအတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးတာပဲကွာ “
အဘွားကြီးကတော့ အသားတုံးကိုကောက်ယူက ဖက်ထားလိုက်သည် ။ နမ်းများပင် နမ်းမိတော့မတတ်။
Anette ပါးပြင်ပေါ်မျက်ရည်တွေ စီးကျလာသည်။
“ ရှက်စရာ ကောင်းလိုက်တာ “ သူမကငိုရင်းပြောသည်။
“ ဘာရှက်ရမှာတုံး ၊ အသားလေး ချိစ်လေးအတွက်နဲ့ ဘာမှရှက်စရာမရှိဘူး “
သူက ထိုင်ချလိုက်ပြီး စီးကရက်တစ်လိပ်မီးညှိ ဖွာလိုက်သည် ။
ထို့ နောက် စီးကရက်ဗူးကို အဘိုးကြီးကို လှမ်းတည်လိုက်သည် ။
အဘိုးကြီးက ရုတ်တရက်ဘာလုပ်ရမည်မသိဖြစ်နေပြီးမှ စီးကရက်တစ်လိပ်ယူကာ ဗူးကို Hans ကိုပြန်ပေးသည်။
“ ယူထားလိုက်ပါ “ “ ကျနော်က လိုချင်သလောက် ယူလို့ ရတယ် “
ထို့ နောက် သူတို့ ထိုင်ကာ စီးကရက်သောက်နေကြသည်။ နောက်ဆုံးတော့ Hans ကပြောလိုက်သည် ။
“ ဘာလို့ ကျနော်တို့ မိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်ရမှာလည်း “
“ ဖြစ်ပြီးတာတွေက ပြင်လို့ မရတော့ဘူးမဟုတ်လား ၊ စစ်ကြီးကစစ်ကြီး ပဲလေ ။
ကျနော်လည်း Soissons မှာတော်တော်ကြာကြာနေရအုံးမယ့်ဘဘောရှိတယ် ။
နောက်အခါတွေလည်း ကျနော် အစားလေး အသောက်လေးယူလာပေးလို့ ရတယ်။
ကျနော်တို့ က ပြင်သစ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတာပါ ။
ဒါပေမယ့် လမ်းမှာတွေ့ ရင်တောင်မှ ဘယ်သူမှကျနော်တို့ ကို မကြည့်ကြဘူးဗျာ ။
နောက်တစ်ခါကျနော်လာရင် စိမ်းမနေပါနဲ့ ၊ ဟုတ်လား “
“ ဘာလို့ ရှင်ကဒီကိုလာချင်နေရတာလည်း ၊ ကျမတို့ ဘာသာနေပါရစေ “
သူ့ ကိုသူလည်းမသိပေ။သူက မိတ်ဆွေလိုချင်နေသည်။
Soissons မှာမိတ်ဆွေမရှိပဲ နေရသော ဂျာမန်တွေဘဝ
ဖော်ရွေမှုကင်းမဲ့တဲ့ အေးစက်စက်ပတ်ဝန်းကျင်က သူ့ ကိုစိတ်ကုန်စေသည်။
သူတို့ ကို တွေ့ ရင်မတွေ့ သလိုအကြည့်လွှဲနေတတ်သောာ ပြင်သစ် များကိုတွေ့ ရင် ဆောင့်ကန်ချင်စိတ်ဖြစ်မိသည်။
ဒါပေမယ့်သူက Anette ကိုတော့ မပြောပြပါ။
သူပြောသည့်အထဲက အမှန်တရားကတော့ သူ Anette နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်လိုတယ်ဟုပြောတာပဲဖြစ်သည်။
သူမက သူဘဘောကျတဲ့ မိန်းကလေးပုံစံမဟုတ်ပါ။
သူဘာလို့ ဒီကောင်မလေးကို ဒီလို လုပ်မိလည်းလို့ သူ့ ကိုယ်သူ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်မေးခဲ့ဖူးသည်။ အဖြေကတော့ရှင်းရှင်းလေး ၊ သူက ဂျာမန်တပ်မတော်ရဲ့ 
အောင်ပွဲအတွက်ရစ်မူးနေသည် ၊ အရက်လည်းမူးနေသည် ၊
မိန်းကလေးကလည်း အောင်နိုင်သူ သူ့ အပေါ်မှာ ကလန်ကဆန် လုပ်ခဲ့လို့ ပဲဖြစ်သည်။
၂ ပတ်လောက်Hans မအားရာ လယ်တဲဖက်ခြေမလှည့်နိုင်ဖြစ်နေသည်။
ဒါပေမယ့် သူကျောခိုင်းလိုက်တာနဲ့ အစားအသောက်တွေကို မြေခွေးငတ်တွေလို စားပစ်မယ့် လယ်သမားကြီးလင်မယားကို မြင်ယောင်မိသည်။
Anette ကရော ၊ သူမလည်းမသေချာ ။ သူမက သူ့ ကို မုန်းသည် ။ မုန်းလိုက်တာမှ .. ဒါပေမယ့်လည်းဘယ်ပြောနိုင်မလည်း ချိစ်က ချိစ် ၊ အသားက အသား၊ မုန်းတာက မုန်းတာပဲ။
သူက သူမအကြောင်း မကြာမကြာတွေးဖြစ်သည်။ ဘာကိစ္စ ဒင်းလေးက ငါ့ကို မုန်းရတာလည်း။
သူငါ့ကို ချစ်လာအောင်လုပ်ရမယ် ။
မိန်းကလေးတွေ ချစ်အောင်လုပ်ရာတွင် အမြဲအောင်မြင်ခဲ့ သူဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ သူလယ်တဲသို့ သွားဖို့ အခွင့်ရလာတော့သည်။
သူက ချိစ် ၊ ထောပတ် ၊ သကြား ၊ အသားဗူးအချို့ နှင့် ကော်ဖီတို့ ကိုယူသွားသည်။
ဒီတစ်ခါတော့ Anette ကိုမတွေ့ ရပေ ၊ သူမကလယ်ထဲမှာ ဖခင်ကိုကူနေသည်။
အဘွားကြီးက ခြံထဲရောက်နေသည် ၊သူယူလာသည့်အထုပ်ကိုတွေ့ တော့ သူမ မျက်နှာလင်းလက်သွားသည်။ သူမက မီးဖိုထည်းကို ခေါ်သွားသည်။
သူယူလာတာတွေမြင်တော့ အဘွားကြီးမျက်ရည်တွေဝဲလာတော့ သည်။
“ မင်းက သိပ်တော်တာပဲကွယ် “
“ ကျနော်ထိုင်မယ်နော် “ သူက ယဉ်ကျေးစွာပြောလိုက်သည်။
“ ထိုင်ပါ ထိုင်ပါ “ အဘွားကြီးက ဆိုရင်းပြူတင်းပေါက်ကလှမ်းကြည့်သည်။
Anette မလာတာ သေချာတော့မှ
“ ဝိုင်တစ်ခွက်လောက်သောက်မလား “ ဟုဆိုသည်။
“ ဟာသိပ်ကောင်းတာပေါ့ ဗျာ “
သူမ၏ အစားအသောက် ငတ်မွတ်ခြင်းက တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် ပျော့ပျောင်းလာစေမှန်းသူသဘောပေါက်လာသည်။
သူ့ ကို အဘွားကြီးလက်ခံလာနိုင်ဖို့ သူမျှော်လင့်လို့ ရသည်။
စောစောက ပြူတင်းပေါက်မှ လှမ်းကြည့်လိုက်သည့်ပုံကိုကြည့်ရင်
“ အသားကိုကြိုက်ပါလား ခင်ဗျာ “ သူကမေးလိုက်သည်။
“ အိုး၊ ကြိုက်တာပေါ့ကွယ် “
“ နောက်တစ်ခါ များများယူလာပါအုံးမယ် ၊ Anette ရောကြိုက်လားဟင် “
“ ထိတောင်မထိပါဘူးကွယ် ၊ ဘယ်တော့မှ မစားဘူးဆိုပဲ “
“ မိုက်လိုက်တာ “ Hans ကပြောသည်။
“ ဒါ ကျုပ်သူ့ ကိုပြောတာပဲ ၊ အစားတွေရှိနေမှ မစားဘဲနေမလားလို့ “
ထို့ နောက်သူတို့ ထွေရာလေးပါးပြောဖြစ်ကြသည် ။
အဘွားကြီးနာမည် မဒမ် Périer ဟုသိလာရသည်။
သူတိုမိသားစုဝင် အကြောင်းမေးသောအခါ အဘွားကြီးမှာ သားတစ်ယောက်ရှိကြောင်း၊
စစ်ဖြစ်တော့ စစ်သားစုဆောင်းရေးထဲပါပြီး သေဆုံးကြောင်း။
တိုက်ပွဲမှာ ကျတာမဟုတ်ဘဲ နမိုးနီးယားဖြစ်ကာ Nancy ရှိဆေးရုံတစ်ရုံမှာကွယ်လွန်ကြောင်းသိရသည်။
“ သေတာပဲခပ်ကောင်းကောင်းထင်ပါရဲ့ ကွယ် “ အဘွားကြီးက ဆိုသည်၊
သူက သူ့ ညီမ Anette လိုပဲ ၊
လက်နက်ချ လို့ ၊ စစ်ရှုံးရတာသာသိရင် သစ္စာဖောက်ခံရတာ မျိုးဖြစ်မှာ “
“ ဘာလို့ ခင်ဗျားတို့ က ပိုလန်ဘက်ကူတိုက်ပေးရတာလည်း ၊ ဘာမှလည်း မဆိုင်ပဲနဲ့ “
“ အင်း၊ မင်းပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်လေ ၊
ကျုပ်တိုပိုလန်ကို့ ဟစ်တလာ သိမ်းတာ ဘာမှဝင်မစွက်လိုက်ရင်
ကျုပ်တို့ ကိုလည်း သိမ်းမှာ မဟုတ်လောက်ဘူး “
သူ ပြန်ခါနီးမှာ ထပ်လာပါအုံးမယ်ဟုပြောခဲ့သည်။
“ အစားအသောက်တွေယူခဲ့ ဖို့ လည်းမမေ့ ပါဘူး “
မကြာမှီ Hans ကို တောဘက်အတွက် တာဝန်တစ်ခုပေးလိုက်ရာ ၊
သူ လယ်တဲသို့ မကြာမကြာလာလည်လို့ ရသွားသည်။
သူက လက်ချည်းပဲ ဘယ်တော့မှမလာပေ။
ဒါပေမယ့်လည်းသူနှင့် Anette ဆက်ဆံရေးမှာထူးမခြားနား ။
သူမက သူ့ ကိုစကားလည်းမပြော ၊ ကြည့်ပင်မကြည့်။
တစ်ခါတစ်လေ စိတ်တိုလွန်း၍ သူမကို အသက်ထွက်အောင် ကိုင်ဆောင့်လိုက်ချင်သည့်အထိပင်။
တစ်နေ့ သူမနှင့်နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ ချိန် သူမကထထွက်သွားမည်အပြု သူတားလိုက်သည်။
“ နေအုံး ၊ ကိုယ်မင်းနဲ့ ပြောစရာရှိတယ် “
“ နေဆိုလည်းနေပါတယ် ၊ ကျမကဘာလုပ်နိုင်မှာလည်း ၊ အားနွဲ့ သူ မိန်းမသား “
“ ကိုယ်ပြောချင်တာက ၊ ကိုယ်ဒီမှာ ကြာကြာနေရဖို့ ကတော်တော်လေးသေချာတယ် ၊
မင်းတို့ ပြင်သစ်တွေ နေရထိုင်ရခက်ခဲလာကြတာလည်း အသိသားနဲ့ ၊
ကိုယ်ကူညီလို့ ရနေတဲ့ဟာကို ၊
ဘာလို့ မင်းက မင်း မိဘတွေလို ကိုယ့်နဲ့ မိတ်ဆွေမဖြစ်ချင်ရတာလည်း “
သူပြောတာ အမှန် ၊
အခုဆို Périer အဖိုးကြီး အဖွားကြီးနဲ့ သူကတော်တော် အလွမ်းသင့်နေပြီ။
အဘိုးကြီး ကအဘွားကြီးလောက်တော့ အရောမဝင် ၊
ဒါပေမယ့် သူ့ ကိုဆေးတံသောက်ဆေးတွေဘာတွေတောင်ယူလာခိုင်းတတ်သည်။
“ ရှင်က ကျမ မိဘတွေလို ရှင့်ကို မခင်နိုင်တာ ဘာကြောင့်လည်းမေးတယ်လား ၊ ဟုတ်လား “
သူမက ဝတ်ထားသော ဂါဝန်ကို နောက်သို့ ဆွဲက သူမကိုယ်ကို Hans ကိုပြလိုက်သည်။
သူ့ မျက်လုံးပင်သူမယုံနိုင်ချေ ။
“ ဟင် ၊ မင်း မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ !! “
သူမက ခုံပေါ်အရုပ်ကျိုးပြတ် ထိုင်ချလိုက်ပြီး မျက်နှာကို လက်များဖြင့်အုပ်ခါ ငိုကြွေးလိုက်သည်။
“ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာမှ ၊တစ်ကယ့်ကိုပဲ “
သူက ရှေ့ တိုးသွားပြီး မိန်းကလေးကို ဖက်ထားရန်ကြံလိုက်သော်လည်း သူမက ထရပ်လိုက်ခါ
“ ကျမကို မထိနဲ့မထိနဲ့၊ ရှင်သွားပါတော့ “
သူ အတန်ကြာအောင်စောင့်နေပြီးမှ ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက် ပြီး Soissons သို့ ပြန်လာခဲ့တော့သည်။
သူက Anette နှင့်သူမ၏ မွေးဖွားလာမည့်ကလေးအကြောင်းတွေးနေမိသည်။
ထိုကလေးက သူ့ ကလေးမဟုတ်ပါလား။
သူ က သူမကို ချစ်နေမိပြီဆိုတာပဲဖြစ်တော့သည်။
ဒီကိစ္စဟာ အင်မတန်ဆန်းကြယ်သလို လန့် စရာလည်းကောင်းလှသည် ။
သူမသည် သူသဘောကျသောပုံစံလည်းမဟုတ် ၊ ချောလည်း အရမ်းမချော ၊
ဘာလို့ သူက ဒီလိုခံစားနေရမှန်းကို မသိပေ ။
ထိုခံစားချက်သည် ခံစားလို့ မကောင်းပါ ၊ ရင်ထဲမှာလည်းနာကျင်နေသည် ၊
သူ Anette ကို ချစ်နေပြီ။
မရှုံးနိမ့်သူ ( ၃ )
နောက် ၃လ ခန့် ကြာပြီးနောက် Hans မှာ Soissons သို့ ပြန်ရောက်လာပြန်သည်။
အောင်ပွဲခံတပ်မတော်နှင့်အတူ သူက ပါရီသို့ လည်းရောက်ခဲ့သည် ။ Arc de Triomphe ကိုပင်
သူ့ ဆိုင်ကယ်နှင့်ပတ် စီးခဲ့ ပြီးပြီ။ Tours နှင့် Bordeaux သို့ လည်းရောက်ခဲ့ ပြန်သေးသည်။
တိုက်ပွဲဆိုလို့နည်းနည်းသာတွေ့ ခဲ့ရသည်။
သူတွေ့ ခဲ့ ဖူးသော ပြင်သစ်စစ်သား အများစုမှာ စစ်သုံပန်းများသာဖြစ်သည်။
အောင်ပွဲကြီးကတော့သူကြုံခဲ့ ရဖူးသမျှတွင်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးပင်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီအပြီးမှာ သူကပါရီမှာတစ်လ တာဝန်ကျသည်။
နောက်တော့ သူတို့ တပ်စုကို Soissons ကို သိမ်းပိုက်ထားသော တပ်ခွဲနှင့်ပူးပေါင်းရန်ပြန်လွှတ်လိုက်သည်။
Soissons က လှပသောမြို့ လေးဖြစ်ပြီး ၊ အစားအသောက် ၊ ဝိုင်အရက်ပေါများရာ
Hans အတွက်နေရထိုင်ရတော်တော် အဆင်ပြေသည်။
သူတို့ တပ်စု Soissons သို့ ပြန်ပူးပေါင်းရမည့်သတင်းကိုသိရသောအခါ
သူက “ ဟိုလယ်တဲကမိန်းကလေးကို သွားတွေ့ ရင်ကောင်းမှာပဲ “ ဟုတွေးမိလိုက်သည်။
ထို့ နောက် ပြေပြေလည်လည်ဖြစ်စေဖို့သူမအတွက် ပိုးခြေအိတ်တစ်စုံဝယ် လိုက်သည်။
ဒီလိုနဲ့အလုပ်ပါးတဲ့တစ်ညနေ သူက ပိုးခြေအိတ်ကို အိပ်ကပ်ထဲထည့်ကာ ဆိုင်ကယ်နှင့်ထွက်လာခဲ့တော့သည်။
အချိန်မှာ ဆောင်းဦးပေါက်ဖြစ်ရာ တောလမ်းတစ်လျှောက်ဆိုင်ကယ်စီးလာရသည်မှာ အရသာရှိလှသည်။
နာရီဝက်ခန့် မောင်းပြီးမှ လယ်တဲသို့ ရောက်သည်။
သူက တံခါးပင်မခေါက်ပဲ လက်ကိုင်ကို လှည့်ဖွင့်ဝင်လိုက်သည်။
မိန်းကလေးက စားပွဲမှာထိုင်ပြီး အာလူးသင်နေသည် ။
သူမက ယူနီဖောင်းဝတ် စစ်သားကိုမြင်တော့ လန့် ပြီး ခုန်ထလိုက်သည်။
“ ရှင်ဘာလိုချင်လို့ လည်း “
နောက်တော့ သူမက သူ့ ကိုမှတ်မိသွားကာ နံရံထိ ထိုးကပ်သွားပြီး လက်ထဲမှာ ဓါးကို ကိုင်ထားသည်။
“ အော ၊ ရှင်ကိုး၊ ဝက်မျိုး “
“ မကြောက်ပါနဲ့၊ကိုယ်မင်းကို ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး ၊
ဒီမှာ မင်းအတွက် ပိုးခြေအိတ်တောင်ဝယ်လာသေးတယ် ကြည့်ပါအုံး “
“ ရှင့် ဟာရှင်ယူပြီး ပြန် ၊ ခုထွက်သွား “
“ မဆိုးပါနဲ့ ကွာ ။ဓါးကို ချလိုက်လေ ၊ ကိုယ့်ကို မကြောက်ပါနဲ့“
“ ရှင့်ကို မကြောက်သေးဘူး “ သူမက ဓါးကိုကြမ်းပေါ်လွှတ်ချလိုက်သည်။
သူက သံခမောက်ကို ချွှတ်ကာ ထိုင်ချလိုက် ပြီး ဓါးကို သူ့ နားရောက်အောင်ခြေထောက်နှင့်ဆွဲယူလိုက်သည်။
“ ကိုယ်အာလူးကူခွာပေးရမလား “ သူမထံမှာ စကားပြန်မရ။
သူက ဓါးကို ယူ၍ အာလူးကို စခွာသည်။
သူမမျက်နှာက တင်းမာနေကာ ရန်လိုသောမျက်လုံးအစုံ နှင့် နံရံကိုကပ်မှီရင်း သူ့ ကို စိုက်ကြည့်နေသည်။
“ ဘာလို့ ဒီလောက်ရန်လို နေတာလည်းကွာ “
“ ကိုယ်က မင်းကို ဒီလိုဖြစ်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး ၊ ဒါတော့ သဘောပေါက်ပါ ၊ အဲဒီတုန်းက စိတ်တိုနေကြတာလေ ၊ မင်းရော ကိုယ်ရောပဲ ၊ မရှုံးနိမ့်နိုင်တဲ့ ပြင်သစ် တပ်မတော်ကြီးနဲ့Maginot Line အကြောင်းလဲပါတယ်လေ “
သူက ရယ်လိုက်သည် ။
“ နောက် ကိုယ်က မူးနေတယ်လေ ၊ ဒါပေမယ့် မင်းကိုယ့်ကိုရတာ မဆိုးပါဘူးကွာ ၊
ကိုယ်က ရုပ်မဆိုးဘူးလို့ ကောင်မလေးတွေပြောကြပါတယ် ဟဲဟဲ“
သူမ က အမုန်းမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ရင်း
“ ရှင် အခုထွက်သွားစမ်း “
“ ကိုယ်သွားချင်မှ သွား မှာပေါ့ “
“ ရှင်မသွားရင် အဖေ့ က Soissons က ရှင့် ဗိုလ်ချုပ်ဆီသွားတိုင်မှာနော် “
“ တိုင်လေ ၊ ဘာမှ မထူးဘူး ကိုယ်တို့ ကို ဒေသခံတွေနဲ့ ခင်မင်အောင်ပေါင်းသင်းဖို့ အမိန့် ချပြီးသား “
“ မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လည်းကွ “
“ ရှင့် အရာမဟုတ်ဘူး “
သူမ ၏ စိတ်ဆိုးနေသော မျက်ဝန်းလေးများက အလွန်ချစ်စရာကောင်းလှသည်။
သူမှတ်မိ သောပုံစံထက် ပင်သူမက အများကြီးပို လှလို့ နေသည်။
သူမ အမေကြီးက သူမ ဆရာမလို့ ပြောခဲ့ဖူးတာ ဆိုတော့ သူမဟာ မိန်းမပျိုအရွယ်ပေါ့။
ဒီလိုဆိုတော့သူကပိုလို့ တောင်သဘောကျသေးတော့ ။
သူစိတ်တွေရွှင်လန်းလာသည် ၊ သူကလည်းခေသူမဟုတ်ပါချေ ၊
မိန်းကလေးတော်တော်များများက သူနဲ့ တွဲရတာကို သဘောကျကြရသောသူပဲ။
“ မင်း အဖေ နဲ့ အမေရော “
“ လယ်ထဲ မှာ အလုပ်လုပ်နေတယ် “
“ ကိုယ် ဗိုက်ဆာတယ်ကွာ ၊ ပေါင်မုန့် လေး ချိစ်လေးနည်းနည်းပေးနော် ၊ ပိုက်ဆံပေးပါ့မယ် “
သူမက ဒေါသနဲ့အော်ရယ်လိုက်သည်။
“ ဒီမယ် ၊ ချိစ့် ဆိုတာ မမြင်ဖူးတာ ၃ လလောက်ရှိပီရှင့် ၊ ပေါင်မုန့် ကလည်း လောက်တောင်မလောက်ဘူး။
ကျမ တို့ မြင်းတွေကိုလည်း ပြင်သစ်စစ်တပ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတည်းကပေးလိုက်ရတယ်။
အခု မျိုးကောင်း ဂျာမန်စစ်သားတွေက ကျမတို့ နွားတွေ ၊ ဝက်တွေ ၊ ကြက်တွေကို ယူသွားပြန်ပီ “
“ သူတို့ ပိုက်ဆံပေးတယ်မလား “ သူကပြောလိုက်သည်။
“ ပိုက်ဆံက ဘာလုပ်ရမလည်းရှင့် ၊ ပိုက်ဆံက စားလို့ မရဘူး “
“ မင်း ဗိုက်ဆာနေတာလား “
သူမ ငိုတော့ သည်။
“ မလိုပါဘူး ၊ ပေါင်မုန့် နဲ့ အာလူးရှိရင်ဖြစ်တယ် ၊ မနက်ဖြန်အဖေက Soissons သွားပြီး မြင်းအသားလေးဘာလေး ဝယ်လို့ ရရင်သွားဝယ်လိမ့် မယ် “
“ ကဲ ဒီမှာ မိန်းကလေး “ “ ကိုယ် ချိစ်တို့အသားတို့ ယူလာ ခဲ့ပေးမယ် “
“ ဘာ ၊ ရှင့် ရဲ့ ချိစ့်တို့ အသားတို့ တော့မစားဘူး ၊ ငတ်လို့ သာအသေခံသွားမယ် ၊ ရှင်တို့ ပေးတဲ့အစားကို မထိဘူး ကျမတို့ ဆီက ရှင်တို့ ဝက်မျိုးတွေ ခိုးသွားတာ “
“ အင်း ၊ ကြည့်သေးတာပေါ့လေ “
သူက သံခမောက်ကို ကောက်ဆောင်းရင်း ထရပ်လိုက်ကာ
“ သွားပါအုံးမယ် မိန်းကလေး နောက်တွေ့ တာပေါ့ “
မရှုံးနိမ့်သူ ( ၂ )
သူနဲ့ Willi တို့ လမ်းပျောက်ပြီးနောက် ၊ လယ်သမားတစ်ယောက်ကိုလမ်းမေးရာ
ထိုလယ်သမားက လမ်းမှားကို ညွန်လိုက်သည်။
ထိုလမ်းအတိုင်းသွားပြန်တော့နောက်ဆုံး ဒီနေရာပဲ ဟိုဘက်လမ်းတစ်ဖက်မှာပြန်ရောက်နေပြန်ရော။
ဒါနဲ့သူတို့ လယ်တဲတစ်ခုသို့ ဝင်ပြီး လမ်းမေးရတော့သည်။
သူတို့ အတတ်နိုင်ဆုံးယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောဆိုသုံးနှုံးကြသည် ၊
အထက်အရာရှိများကလည်း ပြင်သစ်တွေကို ယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံဖို့ 
ပြင်သစ်တွေကလည်း သူတို့ အပေါ်မှာယဉ်ကျေးခဲ့ ရင်ပေါ့လေ။
တံခါးခေါက်တော့လာဖွင့်သူက မိန်းကလေးတစ်ယောက်။ သူမက လမ်းမသိဘူးလို့ ပြောသည်၊
သူတို့ ကတံခါးကိုတွန်းဖွင့်ဝင်လိုက်ကြတော့မှ ကောင်မလေး အမေက လမ်းကိုပြောပြသည်။
ကြည့်ရသည်မှာသားအမိသားအဖ သုံးယောက် ညစာစားပြီးခါစလေး ပဲ၊
ရာသီဥတုအလွန်ပူသောနေ့ ဖြစ်သည့်အပြင် နေ့ ခင်းထဲက ဘာမှ မသောက်ရသေးမှန်း Hans သတိရသွားသည်။
သူကဝိုင်ပုလင်းတစ်လုံးတောင်းရာ Willi ကသူတို့ ဈေးကောင်းကောင်းပေးမှာပါ ဟု ထပ်ပြောလိုက်သေးသည်။
Willi ကလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ၊ပျော့ပျောင်းလွန်းနေသည်။
သူတို့ ဒီလောက်ချိုသာနေစရာမလိုဘူးမလား၊ သူတို့ ကစစ်နိုင်သူများလေ ၊
လစ်ပြီ မလား၊ အင်္ဂလိပ်တွေရော ၊
အကုန်ထားခဲ့ ပြီး သရဲဘောကြောင်ကြောင်နဲ့ ဆုတ်ပြေးလိုက်တာမှတန်းလို့ ။
ဒီတော့ အောင်နိုင်သူတွေက လိုတာယူခွင့်ရှိတယ် မဟုတ်ပါလား။
ဒါပေမယ့် Willi ကတော့ ပြင်သစ်မှာ ၂ နှစ်တိတိ အဝတ်အစား ဒီဇိုင်းနာလုပ်ခဲ့ ဖူးသူ ပီပီ ပျော့ပျောင်းညင်သာသည်၊ ပြင်သစ်စကားတော့ကျွမ်းကျင်ပါရဲ့ပျော့လွန်းတာခက်နေသည်။
ပြင်သစ်တွေကြားမှာ ဂျာမန်တွေ ဒီပုံစံနဲ့ နေလို့ မဖြစ်နိုင်ပေ။
လယ်သမား ဇနီးကြီးက ဝိုင်ပုလင်းတစ်ချို့ စားပွဲပေါ်တင်ပေးရာ ၊
Willi က ဖရန့် ငွေ ၂၀ထုတ်၍ လက်ထည်းထည့်လိုက်သည်။
Hans ပြင်သစ်စကားက Willi ပြောသလိုမကောင်း၊
ဒါ့ကြောင့်လည်း သူက Willi နဲ့ ဆိုပြင်သစ်လို များများပြောဖြစ်သည် ။
အမှားတွေ ပြင်ပြင်ပေးတတ်လို့သူနဲ့ တွဲနေတာလည်းဖြစ်သည်။
သူက အခွင့်သာတိုင်းပြင်သစ်လို ပြောခြင်နေပေရာ အခုလည်း ကြိုးစားပြောဖို့ စကားစတော့ သည်။
သူလည်း လယ်သမားတစ်ဦးသားဖြစ်ကြောင်း ကစသည် ။
“ စစ်ကြီးပြီးသွားရင် ၊လယ်ထဲပြန်ဆင်းမှာ ခင်ဗျ “ သူကပြောလိုက်သည်။
“ ကဲ ၊ရှင်တို့ လမ်းမေးဖို့ လာတယ်မလား ၊ အခုလမ်းသိပီ ၊
သောက်စရာရှိသောက်ပြီး မြန်မြန်ကြွကြတော့ “
သူက သူမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ သူမ က လှတယ်မဆိုနိုင်သော်လည်း တောက်ပသော အနက်ရောင်မျက်လုံးများရှိသည်။ မျက်နှာက ဖြူဖြော့ဖြော့။နှစ်သက်စရာတော့ကောင်းသည်။
သူ့ သူငယ်ချင်းတွေပြောစကားအရ ပြင်သစ်မလေးတွေမှာ
ဂျာမန်မလေးတွေတွင်မတွေ့ ရသော အရာတစ်ခုရှိသည်တဲ့။
Willi ကတော့ အဲဒါခန့် ညား သိုက်မြိုက်ခြင်းဆိုလားပြောသည်။
ဘာဆိုလိုတာလည်းဆိုတော့ Willi က ရှင်းမပြတတ် ၊ တွေ့ တော့ သိလိမ့်မယ် လို့ ပဲပြောသည်။
အင်း ၊ သူတို့ ပါရီကို သွားတော့မှာ ဆိုတော့လည်း အဲဒီတော့မှ သူကိုယ်တိုင်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့လေ။
“ ကဲ၊ သောက်ပြီးရင် သွားရအောင် “ Willi ကဆိုသည်။
ဒါပေမယ့်လည်း Hans ကမသွားချင်သေး ။
“ မင်းက လယ်သမား သမီးနဲ့ လည်းမတူပါလား “ သူကမိန်းကလေးကို ပြောလိုက်သည်။
“ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်လည်း “ အဖြေက ခတ်ပြတ်ပြတ်။
“ သူက ဆရာမလေ “ အမေကြီးက ဝင်ပြောသည်။
“ သြော် ဒီလိုလား ဒါဆို ပညာတတ်ပေါ့ ကွ “
ကောင်မလေးက ပုခုန်းတွန့် လိုက်သည်။
ဒါပေမယ့် Hans က မရပ်သေး ၊ မကောင်းမကန်း ပြင်သစ်စကားနဲ့ဆက်ပြန်သည်။
“ ဒါဆိုမင်း နားလည်ရမှာပေါ့ ၊ အညံ့ခံတာ အကောင်းဆုံးဆိုတာကို ၊ ငါတို့ ကစစ်စကြေညာတာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းတို့ ကစတာ ၊ ငါတို့ က အခုဆို ပြင်သစ်ကို နိုင်ငံကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာ ၊ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ရတယ် ၊စည်းကမ်းဆိုတာဘယ်လိုစသဖြင့် သင်ပေးမှာ ၊ အရိုအသေပေးတတ်အောင်လည်း သင်ရမယ် “
မိန်းကလေး က အမုန်းတရားတွေ ပြည့်နေသော မျက်လုံးနက်များဖြင့် ကြည့်နေပြီးစကား တစ်ခွန်းမဆို။
“ Hans မင်းမူးနေပြီ “ Willi ကဂျာမန်လို ပြောသည်။
“ မမူးပါဘူး ၊ ငါကအမှန်တစ်ရားတွေပြောနေတာ ၊ သူတို့ က နားထောင်ရမယ် “
မိန်းကလေးက “ ဟုတ်ပါတယ် ၊ ရှင်မူးနေပြီ ၊ကဲ သွားပါတော့ “
“ အိုး မင်းဂျာမန်လို လည်းတတ်တယ်ကိုး ၊ ကောင်းပါပီ ဗျာ သွားပါ့မယ် ၊ ဒါပေမယ့် မသွားခင် ကိုယ့်ကို မွှေးမွှေးတစ်ချက်ပေးနော် “
သူမကနောက်ဆုတ်လိုက်ရာ သူက လက်ကို ဖမ်းဆွဲထားလိုက်သည် ။
“ အဖေရေ “ “ အဖေ “ သူမကအော်သည်။
လယ်သမားကြီးက Hans ကို ခုန်အုပ်လိုက်ရာ သူက မိန်းကလေးကို လွတ်လိုက်ပြီး
အဘိုးကြီး ကို ထိုးချလိုက်သည်။
သူမထွက်မပြေးနိင်မီလက်ကို ဖမ်းမိလိုက်ရာ သူမက သူ့ မျက်နှာကို လှမ်းချသည်။
“ ဟ မင်းကဒီလိုလား ၊ ဂျာမန်စစ်သားက မင်းကို မွှေးမွှေးပေးခိုင်းတာ ကို မင်းက ဒီလို လုပ်တယ်လား ၊
အေး သိရစေ့မယ် “
သူကအားကုန်သုံးကာ မိန်းကလေးကို အခန်းထဲမှာဆွဲထုတ်ရန်ပြင်သည်။
အဘွားကြီးက သူ့ ကို အင်္ကျီမှဆွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားသည်။
Hans ကမိန်းကလေးကို လက်တစ်ဖက်မှ ဖမ်းထားပြီး အဘွားကြီးကို နံရံရောက်အောင်ဆော့င့်တွန်းပစ်လိုက်သည်။
“ Hans .. Hans !!“ Willi က အတင်းအော်သည်။
“ ဟေ့ကောင် ၊ ပါးစပ်ပိတ်ထား “
သူက မိန်းကလေးကို မအော်နိုင်အောင်ပါးစပ်ကို လက်နှင့်ပိတ်ကာ အခန်းထည်းမှ ဆွဲထုတ်သွားတော့သည်။
ဒီလိုနဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပွားခဲ့ရတာဖြစ်သည်။
သူ့ အနေနဲ့ ကတော့ မိန်းကလေးက သူ့ ဒုက္ခ သူရှာတာပဲဖြစ်သည်။
သူ့ ကိုမွှေးမွှေးပေးခဲ့ မည်ဆိုပါက သူထွက်သွားခဲ့ မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးက သူ့ ကိုပါးချခဲ့ သည်။
သူက ကြမ်းပေါ်လဲနေသည့် အဖိုးကြီးနှင့် နံရံမှာကပ်နေသည့် အဘွားကြီးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကာ အိပ်ကပ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံတစ်ချို့ ထုတ်သည်။
“ ဒီမှာ ဖရန့် ၁၀၀ ၊ မိန်းကလေး အင်္ကျီအသစ်ဝယ်ဖို့ 
အဟောင်းကတော့ စုတ်သွားပြီ “
သူက ပိုက်ဆံကို စားပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီး သံခမောက်ကို ကောက်ဆောင်းလိုက်ပြီးနောက်
“ သွားမယ် Willi “
သူတို့ က တံခါးကို ဆောင့်ပိတ်ခဲ့ကာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ထွက်သွားတော့ သည်။
W. Somerset Maugham ၏ The Unconquered ကို ကျနော်နားလည်သလိုဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မရှုံးနိမ့်သူ ( ၁ )
Hans မီးဖိုဆောင်ထဲပြန်ဝင်လာတော့ အဖိုးကြီးမှာ သူလက်သီးနဲ့ ထိုးချခဲ့ သောနေရာတွင်လဲနေဆဲ။
မျက်နှာမှာလည်းသွေးစက်တွေနဲ့ ။ အဘွားကြီးက တော့ နံရံကို ကျောမှီကပ်ပြီး
ထိပ်လန့် ခြောက်ခြားသောမျက်လုံးများနှင့် သူ့ သူငယ်ချင်း Willi ကိုကြည့်နေသည်။
Willi ကစားပွဲတွင်ထိုင်ကာ ဘေးနားမှာဝိုင်တစ်ခွက် ၊ လက်ထည်းမှာခြောက်လုံပြူးနဲ့ ။
Hans က စားပွဲသို့ လျှောက်သွားလိုက်ပြီးသူ့ ဖန်ခွက်ကို ဖြည့်ကာ သောက်ချလိုက်သည်။
သူက Willi ကို သွားဖြည်းပြရင်းပြောလိုက်သည်။
“ ကြည့်ရာတာစိတ်ညစ်နေပုံပဲ ချာတိတ် “
Hans မျက်နှာမှာလည်း သွေးစတွေရှိနေသည်။ ချွန်ထက်သောလက်သည်း ၅ချောင်းနှင့်ကုတ်ဆွဲထားမှန်းသိသာစေသော အစင်းငါးခုက ထင်ထင်ရှားရှား။
သူက မျက်နှာကို အသာလေး တို့ ထိကိုင်လိုက်သည်။
“ ဒီကောင်မက ငါ့မျက်လုံးတောင် ဖြစ်နိုင်ရင်ကုတ်ထုတ်အုံးမလို့၊ အိုင်အိုဒင်းထည့်အုံးမှပါပဲ။
ဒါပေမယ့်သူ အခုတော့ ငြိမ်သွားပါပီ ၊ မင်းသွားလေ Willi “ ။
“ အင်း .. ဟို .... အခုနောက်ကျနေပြီ Hans “
“ အရူးမထစမ်းပါနဲ့၊မင်းယောကျာ်းမဟုတ်ဘူးလားကွ ၊ နောက်ကျတော့ ဘာဖြစ်သေးလည်း ၊
ငါတို့ လမ်းပျောက်နေတယ်ပြောလိုက်ရင် ရတာပဲ “
ပတ်ဝန်းကျင်ကတစ်ကယ်တေ့ာမမှောင်သေးပေ ။ အလင်းရောင်ပင်ရှိသေးသည်၊
လယ်တဲထည်းက မီးဖိုချောင်မှာ နေရောင်တွေပင်လင်းနေသေးသည်။
Willi မှာ ဘာလုပ်ရမလည်းမသိပါချေ။ သူကလူကောင်သေးသေး ညိုညိုသွယ်သွယ်မျက်နှာနှင့်။အရပ်သားဘဝက အဝတ်အစားဒီဇိုင်းနာတစ်ဦးဖြစ်သည်။
သူကို Hans က သရဲဘောနည်းသူလို့ ထင်သွားမှာလည်းစိုးလှသည်။
သူကထိုင်ရာမှ ထကာHans ထွက်လာခဲ့ သော အခန်းသို့ ဝင်သွားဖို့ လုပ်သည်။
သူဘယ်သွားမည်ကို ရိပ်မိသောအဘွားကြီးက ရှေ့ သိုခုန်ထွက်ကာ
“ ဟင့်အင်း ၊ ဟင့်အင်း “ ဆိုအတင်းအော်တော့သည်။
Hans က သူ့ ရှေ့ မှာ တစ်လှမ်းပိတ်ရပ်ကာ အဘွားကြီး ကို ပုခုံးမှဆွဲကိုင်၍ပစ်ပလိုက်သည်။
Willi ထံမှခြောက်လုံးပြုံးကို လှမ်းယူကာ သူ၏ဂျာမန်သံအတော်ဝဲသော ပြင်သစ်စကားဖြင့်
“ နှစ်ယောက်စလုံး ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း“ ။
ထို့ နောက်တံခါးကို ညွန်ပြရင်း “ သွား Willi ငါကြည့်ထားလိုက်မယ် ။
Willi ထွက်သွားသည် ၊ သို့ သော် ချက်ခြင်းပင်ပြန်ဝင်လာသည်။
“ သူသတိမေ့ နေတယ် “
“ ဘာဖြစ်လည်း မေ့တော့ “
“ မဖြစ်ဘူးလေကွာ၊ သူကသတိလစ်နေတာကို “
“ဒါပဲ ၊ မင်းကတော့ အရူးပဲ ၊ မိန်းမကျနေတာပဲ ”
Willi မျက်နှာ နီရဲ သွားပြီးနောက် ၊ “ သွားရအောင်ပါ Hans “
“ ဒီ ဝိုင်ပုလင်းကုန်အောင်သောက်အုံးမယ် ၊ ပြီးမှသွားမယ် “
သူက နေလို့ ထိုင်လို့ ကောင်းနေရာအရင်စလို မသွားချင်ပေ။
မနက်ထည်းက ဆိုင်ကယ် မောင်းလာရ သဖြင့် မောလည်းမောနေသည် ။
သူတို့ က ၁၀ ( သို့ ) ၁၅ ကီလိုမီတာ အကွာမှာရှိသည့် Soissons
သေချာတာ ကတော့ ဒီနေ့ ကိစ္စတွေ အကုန်လုံးသည် ထိုကောင်မလေး မမိုက်မဲ ခဲ့ ပါက ဖြစ်လာခဲ့မည်မဟုတ်ပါချေ။
W. Somerset Maugham ၏ The Unconquered ကို ကျနော်နားလည်သလိုဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Labels: Books;ဘာသာပြန်3comments | Links to this post
မေတ္တာ အသင်္ချေ မေမေ
“ မေကြီး မေ့ပုံကို ဒီနေ့ အမေများနေ့ မှာ ဘလော့တင်မလို့ “
“ဟဲ့ ဘယ်ပုံတုံး “
“ ဟို စံပါယ်ပန်းတွေနဲ့ ပုံလေ ၊ အမီးသိမ်းထားတဲ့ ဟာလေ “
“ဟယ် ဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါ အငယ်လေးရယ် ၊ ရှက်စရာ သူများတွေလာပြောနေအုံးမယ်“
“ ပြောပြောပေါ့ မေ့ ပုံတင်တာပဲဟာ ၊ တင်မယ်နော် “
“အေး အေး ပြီးရော တင်စေ တင်စေ “
ခုလေးတင်ဖုန်းဆက်ပြီး ခွင့်တောင်းလိုက်တော့ ပြောဖြစ်တဲ့စကားတွေပါ။
ဒီပုံက မေမေအပျိုတုံးကပုံတဲ့ ၊ ကျနော်နဲ့ များတစ်ခြားစီ။
နွဲ့ နွဲ့ နောင်းနောင်း မေမေက ယောက်ျားလေးလိုလိုပုံစံ ကို ဘယ်လိုများမွေးထုတ်ထားလည်းမှတ်ရ။
သနပ်ခါးခြေဆုံးခေါင်းဆုံးလိမ်းတတ်တဲ့ ၊ ပန်းကြိုက်တဲ့ မေမေ ၊
မျက်နှာပြောင်နဲ့ နေတတ်တဲ့ ကျနော်နဲ့ တစ်ဘာသာ ။
ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် သနပ်ခါးနံ့လေးဟာ မေမေ့့ကိုယ်လုံးမှာ အမြဲတမ်း ယဉ်ယဉ်လေးမွေးပျံ နေတတ်တာ။
မေမေ ခွံ့ကျွေးတဲ့ ထမင်းဆိုပိုစားကောင်းလို့ ငယ်ငယ်က မေမေအားချိန်ကိုစောင့်ပြီးစားခဲ့တာ။
ကြီးလာတော့ မေမေ့ နောက်ကသွားလေရာ အမြဲပါလို့ 
မေမေ့ မိတ်ဆွေတွေက ဟိုမှာလာပါပီ မမနဲ့ ဒရိုင်ဘာလေးတဲ့ ။
ငယ်ငယ်က မေမေ့က စောင့်ရှောက်။
တစ်ခုခု အရေးကြီးတာလုပ်မယ်ဆို မေမေ့ကို ဆုတောင်းခိုင်းနေကြ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး အားရှိလို့ ။
မေမေက ဆုတောင်းပြီးပြီ အငယ်လေး စိတ်မပူနဲ့ ဆို အကုန်အဆင်ပြေမယ် ယုံကြည်တာ။
ရေးမယ်ဆို မပြီးနိုင်တာမို့ လို့ တော်ပါတော့မယ်။
Labels: About me, Remembrance 14 comments | Links to this post
ကျနော့် ကဖေဖေနဲ့ ရုပ်ကလွဲရင်ကျန်တာတွေ တူတာများတယ်။
မွေးနေ့ လည်းတူတယ် ။ စကားအပိုတွေသိပ်မပြောချင်တာလည်းတူတယ်။
စာဖတ်တာ ပန်းချီဆွဲတာ၊ဓါတ်ပုံဝါဿနာပါတာ ၊ စစ်ကားတွေ ကြည့်ရတာသဘောကျတာ၊ လေယာဉ်တွေစိတ်ဝင်စားတာ အကုန်တူတယ်။ခြေချောင်းလေးတွေရဲ့ပုံစံကအစတူတယ်။ ဆံပင်ညိုတိုတိုလည်းတူတာပဲ။
မေမေ နဲ့ မမကတော့ ပိတုန်းရောင်ကေသာတွေလေ။ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကို ပြောင်းဖူးမွေးတွေ
လို့ စတတ်တယ်။ ဖေဖေက အမြဲခေါင်းလိမ်းဆီလိမ်းတာမို့ မသိသာဘူး။ရေချိုးပီးကစဆိုရင်တော့ ညိုနေတာ အရမ်းသိသာတယ်။
ကျနော့် ခေတ်ကျတော့ ကျနော်ကတော့အကြိုက်ပေါ့ ကာလာဆိုးထားရင် အကြာကြီးခံတာ၊ပြန်ဆိုးရတာတောင်သက်သာသေး ။
ဖေဖေ့ဆီက အမွေရလိုက်တဲ့ ဝါဿနာတွေမှာကျနော်အခုတစ်ထိလုပ်ဖြစ်နေတာက စာဖတ်တာပဲ။
စာအုပ်မြင်ဝယ်ချင် တာ ရောက်ရာ အရပ်မှာစာဖတ်နေတာ တွေက အတူဆုံးပေါ့။ ကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေစုစုထားတတ်တာလည်းတူတယ်။
ဖေဖေငယ်ငယ်ကတည်းက စုထားတဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။
နယ်က အဘိုးတို့ အိမ်မှာ ထားထားတာ။ မြန်မာစာအုပ်တွေကို ကျွန်းသေတ္တာတွေ၊ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကို သံသေတ္တာတွေနဲ့ ထည့်ထားတယ်။
ကျနော်တို့ မိသားစုက အပြောင်းအရွေ့ များတာမို့ လို့ ၊ အဘိုးအိမ်ပို့ ထားရတာ။
ကျနော်က နယ်က အဘိုးအိမ်အလည်သွားတိုင်း ဖေဖေ့စာအုပ်တွေ သွားမွှေလေ့ရှိတယ်၊
ကြိုက်တာ တွေ့ ရင်သယ်လာတာပေါ့လေ။ တစ်နေ့ ကြတော့ မြန်မာစာအုပ်တွေ ထားတဲ့ ကျွန်းသေတ္တာတွေကို ဖွင့်လိုက်တာ အထဲမှာ စာအုပ်တွေက အမွအမွအထပ်လိုက်တွေဖြစ်နေတာ ၊
သေချာကြည့်မှ ကိုရွှေကြွက်တွေက သေတ္တာတွေကိုနောက်ကဖောက်ပီး အထဲမှာ စာအုပ်တွေကိုကိုက်ဖြတ်၊ အိမ်လုပ်နေတာကိုး။
ဒီလိုနဲ့ ဖေဖေ့မြန်မာစာအုပ်တွေ တော်တော်များများ ဘဝဆုံးပီးတော့
ကျနော် ကြိုက်လို့ ရန်ကုန်အိမ်သယ်သယ်လာတာတွေပဲကျန်ခဲ့တော့တယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ သံသေတ္တာတွေနဲ့ ထည့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေတော့ကျန်ခဲ့ရှာတယ်။
ဖေဖေက ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တည်းက စာဖတ်ဖို့ အားပေးတယ်။
အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာ ၊ဝတ္ထုတိုလေးတွေက စဖတ်ခိုင်းတယ် ၊ မသိတဲ့စာလုံးတွေလိုင်းတား Dictionary ကြည့် ၊ အဲနားမှာပဲရေးမှတ်ခိုင်းတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရင် အကုန်သိသွားမှာတဲ့။မြန်မာစာအုပ်ကတော့ တိုက်တွန်းစရာကို မလိုတာလေ။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကျတော့ ကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်တော့နားမလည်တာများရင် မဖတ်ချင်ကြဘူးကိုး။ တစ်နေ့ ၂မျက်နှာတော့အနည်းဆုံးဖတ်ရတယ် ၊ပြန်ပြောပြရတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်မြန်မာပြည်ပြန်တော့ စာအုပ်ဟောင်းတွေပြန်ဖွရင်း ကျနော်ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးတွေ သယ်လာခဲ့တယ်။မဖတ်ရတာကြာတော့ အသစ်လိုပဲ။ စာအုပ်တွေဖတ်ရင်းငယ်ငယ်က လိုင်းတားမှတ်ထားတဲ့ စာလုံးလေးတွေမြင်တော့ပြုံးမိတယ် ။ အကျင့်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဖေဖေ့ကို အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကတော့ အဲလိုဖတ်ရတာတော်တော်လေတာ ၊
မမဆိုပိုဆိုးတယ် သူက Time တို့ Newsweek တို့ novels
တို့ ဖတ်ပြရတာ ။မသိတဲ့စာလုံးတွေက အများကြီးလေ ၊
ကျနော်က ကလေးမိုလို့ Short stories လောက်နဲ့ ပြီးတာ။
အဲဒီက ဖေဖေအကျင့်လုပ်ခဲ့တာတွေ အခုဆို မမကိုလည်းအရမ်းအကျိုးပြုတာပေါ့။
အဆင့်အတန်းမှီမှီ အင်္ဂလိပ်စာ နဲ့ စကားကို ဖေဖေ guide လုပ် ပေးခဲ့လို့ အခုဆို
သူ့ အလုပ်မှာအရမ်းအဆင်ပြေတာပေါ့။အဲတုံးကတော့ မျက်ရည်တစ်ရွဲရွဲလေ ။ဟိဟိ။
ကျနော့်အတွက်အဲဒီတုံးက မှတ်ရတာ တော်တော်ရှည်ပြီး သဘောကျခဲ့ တဲ့ စာလုံးတစ်လုံးရှိတယ် ၊
Archipelago တဲ့ ။
အဲစာလုံးကို W. Somerset Maugham ရဲ့ The Narrow Corner မှာပြန်တွေ့ လို့ 
သတိရသွားရင်း နဲ့ ဒီပိုစ့်ကိုရေးမိတာပါ။
စာဖတ်အောင် ၊ စာမှတ်တတ်အောင် ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ ဖေဖေ့ကို ဦးချပါတယ်။
Labels: About me, Remembrance 12 comments | Links to this post